Maalinta: 4 Oktoobar 2019
Dawlada Hoose ee Magaalaweynta Malatya waxay dhammeystirtay ballaarinta iyo dammaanadda shaqooyinka Battalgazi Atabey İskele. Marka laga soo tago shaqooyinka cusub ee wadooyinka, Dowlada Hoose ee Magaalada waxay dayactirey wadooyinka hada jira iyadoo la raacayo heerarka. [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu waxay billowday dalabka 'Roller Compacted Concrete Road (RCC) kaas oo bixiya kaydinta kharashka marka loo barbar dhigo wadooyinka loo yaqaan' Asphalt iyo wadooyinka la taaban karo ee caadiga ah ee degmada Eskipazar ee degmada Altınordu, laakiin taas aad uga xoog badan marka loo eego waarta. Codsatay markii ugu horeysay ee Ordu [More ...]
Turkey ayaa Çambaşı kala soocin cajiib ah isagoo ugu dhow in ay badda isku diyaarinaya xilli ciyaareedka soo ski Ski 2019-2020. Çambaşı Kayak kaas oo ku yaal 2000 acres oo dhul ah dhererkiisuna yahay 650 oo ay leedahay Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu oo ku taal masaafo u jirta 52 km oo u jirta bartamaha magaalada. [More ...]
Wadooyinka cusboonaysiinta xawaaraha xawaaraha ayaa kordhay. Go'aanka Xarunta Isuduwaha Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Antalya (UKOME), xaddidaadaha xawaaraha waddooyinka magaalada ayaa mar labaad la go'aamiyay. Xadka xawaaraha ee 70 kiiloomitir illaa kiilooomitir 82 oo loo maro wadooyinka qaar iyo boulevards ku yaal bartamaha magaalada [More ...]
Duqa Magaalada Mupolla Metropolitan Cusmaan Gürün wuxuu baaritaano ka sameeyay Saldhigga Baska ee Bodrum, kaas oo dhismihiisu socdo. On dhulka 30 kun ee 759 mitir murabac oo ku yaal Torba Junction ee Bodrum [More ...]
Qandaraaska loogu talagalay kiraynta meelaha qaar ee aagaga xarunta Haydarpaşa iyo Sirkeci, oo Wasaaradda Gaadiidka aysan aqbalin ka qeybgalka IMM ee ah "wax kiciya", ayaa bilaabmay. IMM iyo Hezarfen Aviation waxay ku sugnaayeen dhamaadka qandaraaska. Gudi qandaraas [More ...]
Uğur İbrahim Altay, Duqa Magaalada Konya Metropolitan Municipal, wuxuu ka qeybgalay Marmara International City Forum (MARUF) oo ka dhacdey Xarunta Kongareeska ee Istanbul. Duqa magaalada Altay ayaa sharraxay Konya iyo Baaskiilka Master Plan ee madasha lagu qaban doono inta u dhaxaysa Oktoobar iyo 1-2-3 iyada oo loo marayo hal-ku-dhigga “Magaalooyinka Soo-Saarayaasha Xalka,. [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, degmada Izmit Yahya Kaptan Xaafadda Demoqraadiyadu waxay qabaneysaa dayactirka wadooyinka iyo hagaajinta shaqada. Hawlaha ay qabato waaxda cilmiga sayniska, kooxaha, isbaarada rashka ee habeenkii, halka wadadu ay wax soo saareyso. laami [More ...]
Mashaariicda maxalliga ah iyo kuwa qaran ee laxiriira militariga iyo amniga xuduudaha, 2. Waxaa lagu soo bandhigay Shirweynaha Caalamiga ah ee Radar Miltariga iyo Shirka Amniga Xuduudaha 2, waana munaasabada kaliya ee ku takhasustay cilmiga radar iyo amniga xuduudaha. Radar Milatariga Caalamiga ah iyo Xuduudaha [More ...]
Mashruuca Dib-u-hagaajinta Kurbağal ,dere gudaheeda, qaybta qaybta creek waxaa lagu fulin doonaa aagga u dhexeeya Isweydaarsiga Buundada Göztepe iyo Suuqa dukaamaynta ugu Fiican. Marxaladda marxaladaha ayaa lagu dhammeysan doonaa baaxadda socodka shaqada waxaa loo jiheyn doonaa jidka adeegga cusub. ISKI, waa mid kamid ah la shaqeynta Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul [More ...]
Wasaaradda Dhirta iyo Biyaha, mashruuca Channel Istanbul, Terkos Lake iyo Sazlıdere Dam ayaa naafo noqon doona, iyagoo sheegaya in Istanbul ay sii jiri karto fuuq bax. Gudoomiye ku xigeenka CHP Muharrem Erkek; dabeecadda, geed, xayawaan, casiir sabab laxiriira kirada, [More ...]
Bursa Teleferik A.Ş. Maareeyaha guud Burhan Ozgumus, 1 milyan oo TL laaluush ah ayaa loo siiyay maayarka si loo helo wararka xanta ah ee la soo gudbiyay, isagoo sheegay inaysan run ahayn, ayuu yidhi. Ozgumus, wuxuu ballan qaaday intii uu ku sugnaa booqashada madaxa Sakarya County CHP maalin ka hor [More ...]
Riyada hagitaan ee Kartepe iyo dalxiiska Kocaeli ay sugayeen qiyaastii 50 sano mar kale waa gug kale. 10 Diseembar 2018 ma gaari doono 2020, taas oo ah taariikhda gudbinta xarig-galka iyada oo ay socoto munaasabaddii asaasiga ahayd. [More ...]
Guddoomiyaha Çanakkale Orhan Tavlı, 18 Maarso 2017 taariikhda uu dhigay Madaxweynaha Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Buundada, goobta dhismaha ayaa la baaray. Kormeerayaasha guryaha Naci Çetin Akder iyo Ali Alper Orkun, Tahir hirahin, Gudoomiyaha dagmada Lapseki [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun maqaalka cinwaankiisu yahay lar Rails Markhaati u noqoshada Jamhuuriyadeenna wassında waxaa lagu daabacay wargeyska Oktoobar Raillife. Waa tan maqaalka TCDD GENERAL MANAGER UYGUN “3 Sebtember Tan iyo bilowgii shaqadii ugu horaysay ee khadka İzmir-Aydın ee 1856 [More ...]
Maqaalkii bishii Oktoobar ee majaladda Raillife, Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa daabacay maqaal cinwaan looga dhigay "Ankara Sivas YHT Line Ended Hatt. Laga soo bilaabo Wasaaradda TURHAN olarak Wasaaradda ahaan, siyaasadeena gaadiidkeena mudnaanta koowaad ee gaadiidka illaa 2003 [More ...]
Shilalka tareenka iyo geerida mashiinka ah ee lagu soo daabacay war-saxaafadeedka Ururka Shaqaalaha Gaadiidka ee United Izmir Laanta, ayaa dalbaday in xisaabiyeyaasha hortooda ay ka shaqeeyaan garsoorka. Bayaanka waxaa lagu hor dhigay Halkapınar Warehouse, BTS Sensikası Xoghayaha Guud ee Izmir Mehti Seyhan. [More ...]
Xeer-ilaaliye Galip Yılmaz Özkurşun, oo fiirinayay kiiskii masiibada tareenka ee magaalada Çorlu, halkaas oo 25 uu ku waayey noloshiisa, wuxuu wajahay N isagoo bartilmaameedsanaya hay'adda garsoorka si miyir leh gazeteci saxafi Mustafa Hoş oo si dhow ula soconayay musiibada ilaa bilowgii. [More ...]
Konya wajigii ugu horreysay metro ah oo jilicsan ee October 2 2019 Wednesday in Ankara, Turkey, by fog joogto ah "martiqaad" ugu sarreeya waxaa loo sameeyey qaab nidaamka iyo ogeysiis la'aan. Agaasinka Guud ee Maalgashiga Kaabayaasha ee hoos yimaada Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha [More ...]
Khadka Nidaamka Raadinta Cisbitaalka Magaalada Belsin ee Magaalada waxaa lagu soo daray barnaamijka maalgashiga
Wasiirka Difaaca Qaranka Hulusi Akar iyo Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan ayaa booqday Kayseri. Kulan ayaa la qabtay iyadoo ay ka soo qeybgaleen labada Wasiir ayna marti galisay Dowlada Hoose ee Magaaladda. Memduh Büyükkılıç waa [More ...]